ပင်တိုင်ကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 773
သန်းဝင်းလှိုင် နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ မော်လမြိုင်မြို့ ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသကျောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်း စတင်တည် ထောင်သူ၊ ဧချင်း(၁၂)စောင်ကို တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေသူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းဥက္ကဋ္ဌ၊ Burman အင်္ဂလိပ်သ တင်းစာ အယ်ဒီတာ၊ ဥပဒေပြုအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး၊ အစိုးရရှေ့နေ၊ တက္ကသိုလ်ကောင်စီနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်လူကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးချုပ် စသည့် တာဝန်အမျိုးမျိုးကို ထမ်းရွက်ခဲ့သော စွယ်စုံထူးချွန်သူဦးမေအောင်ကို ၁၈၈၀ ပြည်နှစ် ဇန်န ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် စစ်တွမြို့၌ ရခိုင်အမျိုးသားဖြစ်သော အဖဦးသာဒိုးဖြူ၊ အမိဒေါ်နှောင်းဒွေးတို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ငယ် စဉ်ကပင် မိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်၍ ဦးလေးတော်သူ ငွေစာရင်းမင်းကြီး ဦးလှအောင်က တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ခဲ့ရသည်။ ဦးလှအောင် ထိုစဉ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကလကတ္တား (ယခု ကိုးလ်ကတား)မြို့တွင် ငွေစာရင်းမင်းကြီးလုပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးမေအောင်သည် ကာလကတ္တားမြို့တွင်...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ (၁၈.၁၁.၂ဝ၁၂) ရက်နေ့ နံနက် (၁၂:ဝဝ) နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ရုံးချုပ် အမှတ်(၁၃/က)၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ (၄၂) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်သို့ ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုမျိုး (မြန်မာစာ) သည် မွေးနေ့အလှူဒါနနှင့် ကိုမျိုး (မြန်မာစာ) တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့် “ဒီမိုကရေစီခေတ် မီဒီယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းကြောင်းပေါ်က အင်တာဗျူးစကား (သို့မဟုတ်) ကုပ် ပေါ်မိုးထား သောဓါးများ” ထုတ်ဝေခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၏ သုခအလင်း ပညာဒါနသို့ အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ အခမ်းနား တစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ အလှူငွေပေးအပ်ပွဲတွင် Asia Fame Media Group မှ ညီအကိုမောင်နှမများသည် ...
အုန်းနိုင် နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ ● ရံပုံငွေ ရှာဖွေခြင်း ပေါင်းတည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အတွက် ရုံးခန်းငှားထားပြီဖြစ်လို့ အခြားပရိဘောဂနဲ့ လိုအပ်တာတွေအတွက် ရံပုံငွေ ရှာဖို့ လုပ်ရပါတယ်။ အဓိက ရံပုံငွေရနိုင်ဖို့ ဦးအောင်ကြီးရဲ့ညီ ဦးအောင်လေးကို သူတို့မိတ်ဆွေ ဦးထွန်းရင်ကတဆင့် ဆက်သွယ်ပါတယ်။ ရံ ပုံငွေ ဘယ်လောက်လိုလဲလို့ မေးလို့ ဘီဒို (၁) လုံး၊စားပွဲကုလားထိုင်၊ လက်နှိပ်စက် စတဲ့ ပရိဘောဂတွေ နဲ့ ရုံးခန်းငှားခ အပါအ၀င် ငွေ(၆၀၀၀) ကျပ် စာရင်းတင်လိုက်ပါတယ်..။ တခြားအလှူရှင် တဦးချင်းစီ တစ်ရာစ..နှစ်ရာစ ..တစ်ထောင်စ ..လှူမယ့်သူ စာရင်းကိုလည်း တွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဦးအောင်လေးက ကျနော်နဲ့ အခြားခေါင်းဆောင်တယောက်ကို ရွှေတောင်လမ်းက ဦးအောင်ကြီးရဲ့ အ မျိုးဖြစ်တဲ့...
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ လွှတ်တော်တွင်း လွှတ်တော်ပြင် ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ နဲ့ အိုဘားမား နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ မေး။ ။ ဆရာနဲ့ ကျနော်တို့ အခုလက်ရှိမှာ မိုးထိမိုးမိက အလုပ်သမားတွေ၊ စက်ရုံတွေက အလုပ်သမားတွေ၊ လက်ပံတောင်းတောင်က တောင်သူလယ်သမားတွေ၊ မန္တလေးက တုိုင်းရင်းသား ကျောင်းသားလူငယ်တွေက မိမိတို့ အရေးကိစ္စ၊ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စတွေအတွက် တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြတာတွေ လုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီး ကန့်သတ်တာတွေ လုပ်နေတယ်။ အဲသည်အခြင်းအရာတွေကို သာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြရမှာလဲ။ ဖြေ။ ။ လက်ရှိမှာ မိမိတို့ အခွင့်အရေးတွေ၊ ရပိုင်ခွင့်တွေ၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် အလုပ်သမားတွေ၊ လယ်သမားတွေ၊ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ လူတန်းစားစုံကနေ တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်လာကြတယ်။ အဲသည်အတွက် လက်ပံတောင်းတောင်အရေးကိစ္စကိုလည်း...
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – အထက်အောက် ချည်းကပ်နည်းဆိုလို့
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – အထက်အောက် ချည်းကပ်နည်းဆိုလို့ နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂ နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကျော်ကာလအတွင်း Miss International 2012 ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အနေနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသည့် အိုကီနာဝါကျွန်း ၂ဝ၁၂ နိုင်ငံတကာမယ်ပြိုင်ပွဲ၌ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ သော မနန်းခင်ဇေယျာသည် Miss Internet Award နှင့်အတူ People Choice Award ဆုနှစ်ဆုတို့အား ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါ မရမ်းချောင်းကျေးရွာ ရှိ အနာကြီးဝေဒနာရှင်များထံသို့ သွားရောက်ကုသိုလ်ပြု လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပြင် “အနိမ့်ကျဆုံး သော ကုသိုလ်အလုပ်မျိုးကို မြင့်မြတ်သော နှလုံးသားရှိသူတို့သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း အများပြည်သူတို့၏ နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊...
ကာတွန်းစောငို – ခေတ်ပြောင်းနေပြီ တရုတ်ပြည်
ကာတွန်းစောငို – ခေတ်ပြောင်းနေပြီ တရုတ်ပြည် နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ဒီမိုကရေစီပေါက်ကောင်ကို ဒိုင်စားသွားမယ် နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ အများပြည်သူလူထုတို့မှ ယုံကြည်မွန်မြတ်လှသည့် စေတနာ သဒ္ဒါတရားတို့ဖြင့် လှူဒါန်းသည့် အလှူငွေများတို့အား “အများပြည်သူအတွက် အများပြည်သူကောင်းမှု” အဖြစ် ကဗ္ဗည်းမှတ်တမ်းတင်ရှိကာ မြန်မာပြည်တွင်း၌ အများပြည်သူတို့အတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ (ကိုယ်ကျိုးမဖက်) လုပ်ဆောင်ပေးဆပ်နေကြသည့် လူမှုရေးအသင်းများ၊ ဘ/ကကျောင်းများ၊ ပရဟိတ ကျောင်းများ၊ (အခမဲ့) ဆေးခန်းပေးခန်းများ အစရှိသည့် တိုင်း၊ ပြည်နယ်၊ ကျေးရွာဒေသများအထိ လိုအပ် သည့် အကူအညီ အထောက်အပံ့များကိုလည်း ဆထပ်တန်ဖိုး ထမ်းဆောင်ပေးရွက်လျှက်ရှိသည်။ ၁၅.၁၁.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၁းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ပြည်မြို့ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီး တွင် ကုသနေကြသော လူနာများအတွက် ဆေးဝါးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ တန်ဖိုးငွေ (၁၇၃) သိန်း...
ကာတွန်းစောငို – မြန်မာပြည်သည် ဒို့ပြည် … ဆိုပဲ (Saw Ngo)
ကာတွန်းစောငို – မြန်မာပြည်သည် ဒို့ပြည် … ဆိုပဲ နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
Page 773 of 823«1...771772773774775...823»
ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ
Law Eh Soe - Irrawaddy Photo Essays (14)
ထိုင်းလူမျိုး (၆)ဦး က မြန်မာမိန်းကလေအား အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်ကို ထိုင်းအစိုးရမှ အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ်ပေးရန် မြန်မာတို့ ဆန္ဒပြ
Join 93,042 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month March 2018 (90) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ကာတွန်းရွှေဗိုလ်ရဲ့ ဟန်ရေးပြသူတွေရေ … https://t.co/hp2UqmKeUO https://t.co/5DLll1YISv about7hours ago ReplyRetweetFavorite
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● ဂျပန်ကုမ္ပဏီများက မြန်မာ့စီးပွားရေးကို အုပ်စီးမိသွားပြီလားနဲ့ FDI/PPP https://t.co/3wYex7DAg9 https://t.co/NO9WruOBDt about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၆၁) https://t.co/XUmwSnfCPr about 12 hours ago ReplyRetweetFavorite
လင်းသက်​ငြိမ်​ – သရဲရထား https://t.co/FdgSetGbNI about 15 hours ago ReplyRetweetFavorite
ထွန်းဝင်းငြိမ်း – သခင်ဇင် (၁၉၁၂ – ၁၉၇၅) အပိုင်း(၄) https://t.co/kNB2z1A59K https://t.co/VZI4qFhol5 about 15 hours ago ReplyRetweetFavorite
MoeMaKa Network - မိုးမခနဲ့ မိတ်ဆွေများ (26)
Online Shop @ MoeMaKa (8)
About MoeMaKa (83)
ကာတွန်း ATH (202)
Cartoon Box (3,347)
Maung Swan Yi Myanmar Now ကချင် ကမ်လူဝေး ကာတွန်း - KZZH ကာတွန်း Joker ကာတွန်း OKKW ကာတွန်း ကိုခေတ် ကာတွန်း ညီပုချေ ကာတွန်း ညီထွေး ကာတွန်း မိုးသွင် ကာတွန်း ဆွေသား ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ခက်ဦး စိုးနေလင်း ဆန်ဖရန် ဇာနီကြီး ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ထင်အောင် ဒီလူည နရီမင်း ဘင်္ဂလီ ဘင်္ဂါလီ မင်းကိုနိုင် မာမာအေး မိုးသွင် ရခိုင် ရခိုင် ရခုိုင် ရိုဟင်ဂျာ လင်းသက်ငြိမ် သွန်းခ အင်တာဗျူး အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) အိချယ်ရီအောင် (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ဆောင်းဖြူ မောင်စိုးချိန် မောင်ဥက္ကလာ မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) သောင်းပြောင်းထွေလာ အောင်သူငြိမ်း ပြည်တွင်းစစ် ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now)